Izindaba - Izizathu Ezinhlanu Zokusebenzisa Umshini Wokusika we-Laser Precision
Ukuzisika kwe-Laseruhlobo olungaxhumani, olususelwa enqubweni yokukhiqiza eshisayo ehlanganisa ukushisa okugxile namandla okushisa, futhi isebenzise ingcindezi yokuncibilikisa nokufafaza izinto ezindleleni noma ekusikeni okuncane. Uma kuqhathaniswa nezindlela zokusika zendabuko, i-laser cutting inezinzuzo eziningi. Amandla agxile kakhulu anikezwe yi-laser kanye ne-CNC control angasika ngokunembile izinto ezisuka kubukhulu obuhlukahlukene nobubunzima obuyinkimbinkimbi. Laser ahlabayo ingafinyelela ephezulu ukucacisa futhi ezincane-ukubekezelelana yokukhiqiza, ukunciphisa imfucuza impahla, futhi ukucubungula ukwehluka impahla. Inqubo eqondile yokusika i-laser ingasetshenziswa kabanzi ezinhlobonhlobo zezicelo zokukhiqiza, futhi isibe yigugu embonini yezimoto, ikhiqiza izingxenye eziyinkimbinkimbi nezishubile ngezinto zokwakha ezahlukahlukene, kusuka kuma-hydroformed 3D shapes kuya kuma-airbags. Imboni eqondile ye-elekthronikhi isetshenziselwa ukuqeda imishini yensimbi noma izingxenye zepulasitiki, izindlu, namabhodi wesifunda. Kusukela ekusetshenzisweni kwama-workshops kuya kumasifundisane amancane kuya ezikhungweni ezinkulu zezimboni, banikeza abakhiqizi izinzuzo eziningi. Lezi izizathu ezinhlanu zokuthi kungani kusetshenziswa ukucacisa kwe-laser.
Ukunemba okuhle kakhulu
Ukunemba nekhwalithi yomphetho wezinto ezisikwe nge-laser zingcono kunalezo ezisikwe izindlela zendabuko. Ukusika i-Laser kusebenzisa ugongolo olugxile kakhulu, olusebenza njengendawo ethinteke ekushiseni ngesikhathi senqubo yokusika, futhi ngeke lubangele umonakalo omkhulu oshisayo endaweni eseceleni. Ngaphezu kwalokho, inqubo yokusika igesi enomfutho ophakeme (imvamisa i-CO2) isetshenziselwa ukufafaza izinto ezincibilikisiwe ukususa izingcezu zezinto zokusika zezinto zokusebenza ezinciphile, ukucubungula kuhlanzekile, futhi imiphetho yezimo eziyinkimbinkimbi nemiklamo ibushelelezi. Umshini wokusika we-laser unomsebenzi wokulawula izinombolo wekhompyutha (CNC), futhi inqubo yokusika i-laser ingalawulwa ngokuzenzakalela ngohlelo lwangaphambi kokuklanywa komshini. Umshini wokusika we-laser olawulwa yi-CNC unciphisa ubungozi bephutha le-opharetha futhi ukhiqize izingxenye zokubekezelela eziqondile, ezinembile, futhi eziqinile.
Thuthukisa ukuphepha emsebenzini
Izehlakalo ezibandakanya abasebenzi nemishini emsebenzini zinomthelela omubi ekukhiqizeni nasezindlekweni zokusebenza kwenkampani. Ukusebenza nokuphathwa kwemisebenzi yokusebenza, kufaka phakathi ukusika, yizindawo lapho izingozi zivame khona. Ukusebenzisa ama-lasers ukusika lezi zinhlelo zokusebenza kunciphisa ubungozi bezingozi. Ngoba inqubo yokungaxhumani, lokhu kusho ukuthi umshini awuthinti ngokomzimba okokusebenza. Ngaphezu kwalokho, isizukulwane sogongolo asidingi ukungenelela komunye opharetha ngesikhathi senqubo yokusika i-laser, ukuze ugongolo olunamandla amakhulu lugcinwe ngokuphepha ngaphakathi komshini ovaliwe. Ngokuvamile, ngaphandle kokuhlolwa nokusebenza kokugcinwa, ukusika i-laser akudingi ukungenelela okwenziwa ngesandla. Uma kuqhathaniswa nezindlela zokusika zendabuko, le nqubo inciphisa ukuthintana ngqo nobuso bento yokusebenza, ngaleyo ndlela inciphise amathuba ezingozi zabasebenzi nokulimala.
Ukwenza izinto ezihlukahlukene kakhulu
Ngaphezu kokusika ama-geometri ayinkimbinkimbi ngokunemba okuphezulu, ukusika kwe-laser futhi kuvumela abakhiqizi ukuba basike ngaphandle koshintsho olwenziwe ngomshini, basebenzise izinto eziningi nobubanzi obubanzi bokushuba. Usebenzisa ugongolo olufanayo ngamazinga ahlukile wokukhipha, amandla nobude, ukusika kwe-laser kungasika izinsimbi ezahlukahlukene, nokulungiswa okufanayo emshinini kungasika kahle izinto zobukhulu obuhlukahlukene. Izingxenye ezihlanganisiwe ze-CNC zingenziwa ngemishini ukuhlinzeka ngokusebenza okunembile.
Isikhathi esithathayo ukusetha nokusebenza kwemishini yokukhiqiza sizokhuphula izindleko zokukhiqiza zizonke zomsebenzi ngamunye, futhi ukusetshenziswa kwezindlela zokusika i-laser kunganciphisa isikhathi sokulethwa esiphelele nezindleko eziphelele zokukhiqiza. Ukuze laser ahlabayo, asikho isidingo ukushintsha bese usetha isikhunta phakathi izinto noma ugqinsi impahla. Uma kuqhathaniswa nezindlela zokusika zendabuko, isikhathi sokusetha se-laser sizoncipha kakhulu, kufaka phakathi izinhlelo eziningi zomshini kunokulayisha izinto. Ngaphezu kwalokho, ukusika okufanayo nge-laser kungashesha ngokuphindwe ka-30 kunokusawa kwendabuko.
Izindleko zempahla ephansi
Ngokusebenzisa izindlela zokusika ze-laser, abakhiqizi banganciphisa imfucuza ebonakalayo. Ukugxila kugongolo olusetshenziswe kunqubo yokusika i-laser kuzokhiqiza ukusika okuncane, ngaleyo ndlela kunciphise ubukhulu bendawo ethinteke ekushiseni futhi kunciphise ukulimala okushisayo nobuningi bezinto ezingasebenziseki. Lapho kusetshenziswa izinto eziguquguqukayo, ukuguquguquka okubangelwa amathuluzi emishini yomshini nakho kukhulisa inani lezinto ezingasebenziseki. Imvelo engeyona yokuxhumana nokusika kwe-laser iqeda le nkinga. Inqubo yokusika i-laser ingasika ngokunemba okuphezulu, ukubekezelelana okuqinile, nokunciphisa ukulimala kwempahla endaweni ethinteke ekushiseni. Ivumela ukwakheka kwengxenye ukuthi kubekwe ngokucophelela kokuqukethwe, futhi idizayini eqinile inciphisa udoti wezinto futhi yehlisa izindleko zempahla ngokuhamba kwesikhathi.